AMD Ryzen 3 1200 uye 1300X CPU Ongororo - WebSetNet
AMD Ryzen 3 1200 uye 1300X CPU Ongororo
Kuunza mune muswe-kumagumo eazvino AMD CPUs isu tine iyo Ryzen 3 mutsara. Ichi chi AMDChipo cheiyo bhajeti-inofunga PC mushandisi. Nhasi tichave tichitarisa kune maviri quad-core zvipiriso, iyo 1200 uye 1300X. Iyo 1300X ine XFR tekinoroji yatakaona kubva ku Ryzen 7 1800X, 1700X, uye Ryzen 5 1500X / 1600X kubvumira kukurumidza kumhanya pamusoro peyakajairika max. Iyo 1200 yakavharirwa kune ayo akanyorwa kumhanya, kunze kwekunge iwe uchipfekera. Imwe misiyano mikuru kubva kuRenzen 5 neRenzen 7 maCUU ndiko kubviswa kweMamwechete Multithreading (SMT) kubva kuRenzen 3 processor. Kunyangwe izvi zvichireva kuita kwekurohwa kwemashandisirwo akaverengeka, zvakare inoderedza mutengo wechigadzirwa ichiita kuti zviwanikwe kune vamwe vashandisi. Ngatinyatso tarisei pane iyo lineup izvozvi.
Mitsara uye Zvikamu
Kubva pane tafura yezvataurwa pazasi, iyo 1200 ne1300X ese ari maviri macad core CPU asina SMT, ichipa huwandu hwese hwemakore mana neshinda. Iyi yakazara yepakati / tambo kuverenga inouya kubva mukushandiswa kwemaviri CPU Complexes (CCX), zvimwe pane izvi kurongeka mune yechipiri. Iyo base wachi inopinda mu3.1 GHz uye inowedzera maviri macores (tambo ina) kuenda ku3.4 GHz yeiyo 1200 uye 3.5 GHz inokwidziridza ku3.7 GHz pa1300X. Iko kuisirwa kweXFR (Xtended Frequency Range) tekinoroji pa1300X inobvumira imwe 200 MHz pamusoro pese hwaro uye kuwedzeredza wachi, kana tembiricha ichibvumidza. TDP yeaya maCUU maviri anouya mu65 W kune ese ari maviri 1200 uye iyo 1300X. Iyo inotonhorera yepakati pakati pefa neHS is solder, pachinzvimbo chekupisa poda seIntel yakashandisa pane yavo Mainstream CPUs.
SaRenzen 5, iyo Ryzen 3 CPUs ichave yakaenzana pakati peCCXs. Ose maviri Ryzen 3 1200 uye 1300X ane maCCX maviri ane macores maviri akagoneswa pane imwe neimwe. AMD iri kuichengeta iri pakati nepakati uye vachishandisa yavo yekusarudzika musimboti inokanganisa mashandiro kudonhedza iyo yepakati kuverenga.
Chiyeuchidzo pane iyi CPU / platform inobatsira zvachose 128 GB ine tsananguro yebumbiro reDDR4-2400 mune imwe nzira yekugadzirisa. Iyo haitsigire ECC yekuyeuka.
Nezve PCI Express (PCIe) rutsigiro, Ryzen inopa nzira dzese makumi maviri nemana kubva kuCUU inobvumira kushanduka kwakanaka kwemakadhi akawanda, PCIe-based NVMe SSDs, uye mamwe maPCI-based zvishandiso. Gumi nenhanhatu yemigwagwa yakatsaurirwa kumifananidzo, ina yakatsaurirwa kune yekuzvarwa M.24 PCIe NVMe slot, uye mana ekupedzisira anobatana ne chipset. Chipsets dzakasiyana dzinozopa yavo yekuwedzera nzira dzePCIe dzekuwedzera kubatanidza michina.
Windows 10 ndiyo chikwata chinotsigirwa zvakarongwa cheRevzen. Izvo zvakati, kuchava nemotokari inowanika kushandiswa nayo Windows 7 uye 8.1, asi vanoziva kuti hapana hurumende inotsigirwa yehutano hukuru hwekushanda.
Magadzirirwo Ryzen 3 1200 Ryzen 3 1300X
Base Clock Dhigiri 3.1 GHz 3.5 GHz
Boost Clock Speed 3.4 GHz 3.7 GHz
Mirayiridzo Yakaiswa 64-bit 64-bit
Mirayiridzo Yakarongedzwa SSE 4.1 / 4.2 / 4a, AVX2, SHA SSE 4.1 / 4.2 / 4a, AVX2, SHA
Transistor Count 4.8 mabhiriyoni 4.8 mabhiriyoni
Integrated Graphics N / A N / A
L1 Cache 128 KB I-Cache (64 KB neCCX)
128 KB D-Cache (64 KB neCCX) 128 KB I-Cache (64 KB neCCX)
128 KB D-Cache (64 KB neCCX)
L2 Cache 2 MB (512 KB pamusana) 2 MB (512 KB pamusana)
L3 Cache 8 MB (4 MB neCCX) 8 MB (4 MB neCCX)
Max Memory Memory 128 GB 128 GB
Mamwe Memory DDR4-2400 DDR4-2400
# ye Memory Memory 2 2
ECC Memory Support Aihwa Aihwa
Max # ye PCI Express Lanes 24 Lanes 24 Lanes
Tafura iri pazasi ndeye runyorwa rweiyo Ryzen mutsara. Yese CPU iri pane iyi rondedzero inodarika, uchifunga kuti iwe unotenga mamaboard ane chipset inokwanisa kuita saizvozvo. Ma SKU chete ane X kumagumo ane XFR nyowani (eXtended Frequency Range) tekinoroji, chinyorwa. Sekureva kwe AMD, iyo X SKU processor inogonerwa uye inogadzirwa kuve vari nani pamusoro pevanovhara.
Ryzen 7 1800X 8 / 16 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB Aihwa Ehe 95 W-SR3 +
Ryzen 7 1700X 8 / 16 3.4 GHz 3.8 GHz 16 MB Aihwa Ehe 95 W-SR3 +
Ryzen 7 1700 8 / 16 3.0 GHz 3.7 GHz 16 MB Wraith Spire Aihwa 65 W
Ryzen 5 1600X 6 / 12 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB Aihwa Ehe 95 W
Ryzen 5 1600 6 / 12 3.2 GHz 3.6 GHz 16 MB Wraith Spire Aihwa 65 W
Ryzen 5 1500X 4 / 8 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB Wraith Spire Ehe 65 W
Ryzen 5 1500 4 / 8 3.2 GHz 3.4 GHz 16 MB Wraith Stealth Aihwa 65 W
Ryzen 3 1300X 4 / 4 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB Wraith Stealth Ehe 65 W
Ryzen 3 1200 4 / 4 3.1 GHz 3.4 GHz 16 MB Wraith Stealth Aihwa 65 W
CPU Clock Speed ​​Breakdown
Kuita kuti zvive pachena zvakajeka kuti kasivha yeawa iri mune zvese zvinotakura / kutonhora, tapota ona tafura iri pasi apa.
All Cores Loaded 3.1 GHz 3.1 GHz
Makore maviri (Four Threads) Akachengetwa 3.4 GHz 3.45 GHz
Rimwe Core (Two Threads) Rakatakurwa 3.4 GHz 3.45 GHz
All Cores Loaded 3.5 GHz 3.7 GHz
Makore maviri (Four Threads) Akachengetwa 3.7 GHz 3.9 GHz
Rimwe Core (Two Threads) Rakatakurwa 3.7 GHz 3.9 GHz
Pazasi pane mimwe mifananidzo kubva ku AMD yeiyo chigadzirwa kurongedza kweiyo nyowani Ryzen 3 CPUs. Ose ari maviri 1200 uye 1300X anouya naWraith Stealth (akafananidzirwa gare gare).
Tichitarisa iyo Wraith Stealth, tinoona yako yekutanga yakasanganisira heatsink. Yechina-pini fan fan yekubatanidza pano inobvumira iyo PWM kudzora kweiyo fan kumhanya. Zvekare, izvi zvinosanganisirwa zvese zviri zviviri mazana maviri negumi nematanhatu.
Wraith Kubira - Pamberi Wraith Stealth - Kumashure
Tevere kumusoro mifananidzo yemaviri maRenzen 3 sampuli yatinayo, kumberi uye kumashure Ini handioni musiyano unonzwisisika pakati peCPUs kunze kwekumaka laser pane IHS.
Ryzen 3 CPU - Pamberi Ryzen 3 CPU - Kumashure
Iyo data ratakatora rinotipa isu rakakura zano rekuita kwaro zvese muzvitoro (hapana turbo), uye nekufananidza mawowpepepe kuona IPC kuita mutsauko pakati pavo vese. Ini ndakasanganisira Kaby Lake mhedzisiro ne i7-7700K, iyo quad musimboti ine SMT muRenzen 5 1500X, uye mukuru-mukomana Ryzen 7 1800X. Nehurombo handina kana i3 kana i5 processors paruoko kuenzanisa nayo.
i7-7700K Ryzen 5 1500X Ryzen 7 1800X
Motherboard GIGABYTE Z270X-Gaming 8 ASUS Crosshair VI Gamba ASUS Crosshair VI Gamba
ndangariro Corsair Vengeance LPX 2 × 8 GB DDR4-3000 15-17-17-35 G.SKILL Trident Z 2 × 8 GB DDR4-3866 18-19-19-39 G.SKILL Trident Z 2 × 8 GB DDR4-3866 18-19-19-39
HDD OCZ Trion 150 480 GB OCZ Trion 150 480 GB OCZ Trion 150 480 GB
Magetsi EVGA SuperNova G2 850 W EVGA SuperNova G2 850 W EVGA SuperNova G2 850 W
Video Card EVGA GTX 980 Ti FTW GAMING EVGA GTX 980 Ti FTW GAMING EVGA GTX 980 Ti FTW GAMING
kutonhora CoolerMaster Glacer 240L Tsika Loop ine Alphacool XP3 uye 3.120 Radiator Tsika Loop ine Alphacool XP3 uye 3.120 Radiator
Uye test system:
CPU AMD Ryzen 3 1200 / 1300X
CPU Cooler Tsika Loop ine Alphacool XP3 uye 3.120 Radiator
Motherboard ASUS Crosshair VI Gamba
RAM G.SKILL Trident Z 2 × 8 GB DDR4-3866 18-19-19-39
Magetsi EVGA SuperNova G2 850 W
uchishandisa System Windows 10 x64
benchmarks Ona Pasi
Zviratidzo zvose zvaiitwa nebhobhobhoyo yakagadzirirwa kugadziridzwa kusinganisirwa (kunze kwezvimwe zvirongwa zvekuyeuka zvaifanira kugadzirirwa nemaune). Apo "chikwata" chinotaurwa pamwe chete neawa, inodaro kwete inoratidzira iwo ekuwedzera maawa, chete ewachi ewachi. Ndakaedza nenzira iyi sezvo zvinoita kunge mamaboardboard akasiyana nemaitiro avanoshanda kunze kwebhokisi. Izvi zvinobvisa chero mutsauko mashandisiro anoita AMD / Intel yavo turbo maficha uye mabhatani emamaoko anobata sei turbo, saka izvi zvinowedzera zve "kumhanya izvo iwe zvawakapwanya" mhando yekuyedza kweanomhanyisa stock. Ndangariro dzekumhanyisa dzakaiswa paDDR4-3000 15-15-15-35 yekuyedza kwese, zvisinei nekiteki yakatarwa. Icho chete chinosarudzika pane izvi i AMD sisitimu inomhanya paDDR4-2933 16-15-15-35, izvi zvinokonzerwa nemabatiro ekuparadzanisa ndangariro nenguva.
Mushure mekuyedzwa, isu takabva tachinjisa kuenzanisa iyo AMD neIntel masisitimu ese panguva imwecheteyo wachi (4 GHz, kunze kweRenzen 3 pa3.9 GHz). Uku kuyedzwa kuchabvisa musiyano muMirayiridzo Per Clock (IPC) pakati pemasampuli. Izvi zvinoshandawo kune bvunzo dzemitambo.
AIDA64 Engineer CPU, FPU, uye Memory Test
Cinebench R11.5 uye R15
SuperPi 1M / 32M
WPrime 32M / 1024M
Zvose zvidzidzo zveCPU zvakanga zvichishandiswa pazvigadziriswa zvisiri izvo kunze kwekunge zvakataurwa.
Yese miedzo yemutambo yaishandiswa pa 1920 × 1080 uye 2560 × 1440. Tapota ona yedu kuongorora nzira kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemutambo wemutambo. Nokuda kwezvakawanikwa zvevamwe vekare CPU tichave tichishandisa 980Ti kuedza mitambo.
3DMark Moto Strike Extreme
Kumusoro kutanga, iyo AIDA64 CPU bvunzo. Aya maedzo ari pa AMD / Intel base wachi kumhanya yakanyorwa. Tinogona kuona iyo 1200 uye 1300X ichiita kuratidzwa kukuru kupikisana nemakwikwi anomhanyisa.
AIDA64 CPU - Stock
AIDA64 CPU - Dhata Dhata
CPU mambokadzi MufananidzoWorxx Zlib AES Hash
1200 @ 3.1 GHz 25896 18691 186.6 24296 6133
1300X @ 3.5 GHz 29380 19730 212.1 27489 6943
Tevere tinoona iyo FPU bvunzo. MuVP8 yazvino yekuvandudza yanga isiri kutamba zvakanaka, saka iwo manhamba haana kuisirwa. Zvekare, yakakosha kuverenga uye / kana SMT inoita iyo Ryzen 3 machipisi anounza kumashure sekutarisirwa.
AIDA64 FPU - Stock
AIDA64 FPU - Yakashata Dhata
1200 @ 3.1 GHz 15365 8077 36050
1300X @ 3.5 GHz 17284 9154 4131
Iwo ekuyeukwa kwendangariro anonyanya kutaura ega. Iyo inotarisirwa setafura seti yenhamba pano. Memory latency ichiri yakakwira kuRenzen, asi zvinoita kunge isingakanganise mashandiro mune chero kumwe kuyedzwa. Ngatitaurei kuva vakatendeseka pano, ruzhinji rwevashandisi havazombo cherekedza iyo yekuwedzera 20-30 ns pamusoro peIntel sezvo kazhinji mashandisirwo emamiriro asiri ekumanikidza kurangarira.
AIDA64 Mem - Stock
AIDA64 Mem - Yakashata Dhata
CPU verenga nyora mufananidzo Latency
1200 @ 3.1 GHz 42830 43135 37362 85.4
1300X @ 3.5 GHz 43393 43633 37440 82
Miedzo Yenyika Yechokwadi
Mune inotevera seti yekuyedza iwe unogona kunyatso tarisa pa1500X uchienzaniswa neiyo 1200 uye 1300X kuti uone kuti yakawanda sei SMT inoita. Sezvo Ryzen 3 yakanangana neIntel i3 lineup, ndingati ivo vari kuita zvakashongedzwa zvakanaka tichifunga kuti yaive inopfuura hafu yekumhanyisa kweiyo i7 mune ese bvunzo kunze kweX265.
Cinebench R11.5 / R15, POVRay, x265 (HWBot), 7Zip - Stock
1200 @ 3.1 GHz 5.48 480 1171.4 15.25 13186
1300X @ 3.5 GHz 6.24 547 1334.53 17.08 14812
Miedzo yepamberi zvirokwazvo haisi sutu yakasimba ye AMD, saka iyo Ryzen 3 mhedzisiro pano ndeye izvo zvandaitarisira.
SuperPi 1M / 32M, wPrime 32M / 1024M - Stock
SuperPi uye wPrime Benchmarks - Raw Data
1200 @ 3.1 GHz 14.081 745.127 10.316 321.595
1300X @ 3.5 GHz 12.407 678.736 9.13 285.471
Ingori chiyeuchidzo, bvunzo dzese kubva apa kuenda kumberi dzine CPU dzese dzinomhanya pa4 GHz, 3.9 GHz yeRenzen 3, pachinzvimbo chekumhanya kwavo kwemasheya. Uye sezvataitarisira, mhedzisiro mhedzisiro yemitambo yaive mukati meganho yekukanganisa kweumwe neumwe. Musiyano chete unonyanya kukosha pano uri muAshes DX12, iyo yakagadziridzwa yeRenzen ikozvino uye inogona zvakare kushandisa akawanda macores. Ryzen 3 inogona mutambo neakanakisa acho, kunyangwe pa1440p.
1080p Gaming Results - Head to Head
1440p Gaming Results - Head to Head
Mazhinji emapoinzi misiyano pano mu3MMark Moto Strike Yakanyanyisa yakabva mukuyerwa kwemakore muFizikisi bvunzo. Iyo diphi ye1300X inoita kuti ndifunge kuti yanga isiri 100% yakagadzikana pa3.9 GHz. Zvese mune zvese, ini ndakafadzwa neizvi kuve bhajeti processor.
3DMark Moto Strike Extreme - Musoro Kumusoro
Musoro kune Musoro Mhinduro
Mumusoro medu kumisoro mhedzisiro, isu takamhanya ese masisitimu pa4 GHz, kunze kwe3.9 GHz yeRenzen 3. Izvi zvinoratidza misiyano muIPC uye macores zvakananga. Pakazara, isu tinoona yakanaka kuyera kana uchisimudza iyo CPU kumhanya sezvatinazvo nevamwe maRenzen processor.
AIDA64 CPU - 4 GHz
AIDA64 FPU - 4 GHz
AIDA64 Mem - 4 GHz
Cinebench R11.5 / R15, POVRay, x265 (HWBot), 7Zip - 4 GHz
SuperPi 1M / 32M, wPrime 32M / 1024M - 4 GHz
Ndichiri kuyedza kudzikamisa ye 4.0 GHz kuyedzwa kweiyo Ryzen 3 1200, ini ndakakwanisa kuidzikisira iyo tad. Izvo zvaisazogadzikana pa4.0 kwandiri, kunyangwe iine yakawanda magetsi, asi ini ndaive nayo ichimhanya paiyo kumhanya kwechinguva. Kupera kwemugwagwa pano, kugadzikana zvakakwana kumhanya mabhenji, yaive 3.9 GHz.
Iyo nyaya yaive yakafanana zvakafanana neiyo Ryzen 3 1300X, yakabuda pa 3.9 GHz futi. Iyi yaive kurwira kunyange kutora iyo sisitimu yekuda kushandira pamwe pa3.9 GHz, asi ini ndakazopedzisira ndagona kuitisa benchmarking yakagadzikana. Kunyangwe zvakadaro, hapasisina mutangi yechikamu ichi chesilic kana.
Mashoko anobva kuna AMD pamusoro peKupedza
Sezvo mutungamiri mukuru: CPU voltage yepamusoro kune 1.35 V inogamuchirwa nokuda kwekutya zuva nezuva masikati machena e AMD Ryzen processor. Maitiro makuru kusvika ku 1.45 V anowedzerawo, asi mamiririri edu anoratidza kuti kupora kwenguva refu kunogona kuchinjwa. Pasinei nemhepo yako, ita nechokwadi chokuti uri kushandisa kukwanisa kugadzirisa kuchengetedza kutsetseka zvakaderera sezvinobvira.
Nepo apo hakuna kumbovimbisa nekupfekedzwa, vazhinji vevashandi vanofanira kuwana kuti hutatu hutatu, tsvina gumi nematanhatu, inonzi AMD Ryzen processor ichasvika 4.2 GHz pamusana wekutsvaga kwe1.45 V. Kufambira mberi uye kukwana overclockers kuedza kushandura zvinyorwa zvinyorwa zvingawana mamwe musoro kuburikidza nekudzivisa mazai uye / kana kudzivisa SMT pamabhadhi maamai anopa izvi zvisarudzo muBIOS.
CPU wachi inopepetwa yakagadzirirwa neMULTI * Ref_Clk. AMD Ryzen ™ CPU ane 0.25X akawanda.
Ref_clk ndeye 100 MHz.
Nepo iyo ref_clk kukosha kuchichinjika, kugadzikana kwesisitimu kunogona kukanganiswa kana uchitsauka kubva pane iyi kukosha.
Vashandisi vanokurudzirwa kushandisa zvakavhurwa zvinowanda.
Vanogadzira AMD Ryzen ™ havashandise tafura dzakafanogadzirirwa VID.
Naizvozvo, hapana yakatarwa Vcore kana iyo CPU ichimhanya mune yayo yekunze-kwebhokisi mamiriro.
Default Vcore ichasiyana zvichienderana nebasa rekutakura uye ichatangira kubva pa1.2-1.3625 V.
Kuwedzeredza processor ye AMD Ryzen ™ inobata iyo voltage kusvika 1.3625 V, asi kukosha uku kunogona kuchinjwa.
Ma voltages ekutsvaga:
CPU Vcore: Tarisa CPU VID kukosha (mhando muukoshi)
CPU SoC voltage: Tarisa VDDCR_SOC kukosha (Type in value). Default iri 0.99 V. Kugadziridza izvi kusvika 1.1 V kunogona kubatsira kudzikamisa ndangariro zvakapfurikidza.
Memory voltage: Tarisa MEM_VDDIO (nyora kukosha) uye MEM_VTT (seta MEM_VTT kusvika ½ yeMEM_VDDIO). VDDIO imhepo ("memory voltage") inopihwa kuDRAM ICs, uye MEM_VTT masimba ekugumisa pfungwa mukati meDRAM ICs. Aya maitiro ari OFFSETS uye anoverengwa se zero. Simbisa Ndangariro VDDIO kudzikamisa ndangariro kudarika. (semuenzaniso MEM_VDDIO yakaiswa ku0.025 ichaunza 1.5 V DRAM kusvika 1.525 V.)
Kushandiswa Kwemagetsi uye Kutsigira
Pano tinoona kufananidzwa kwesimba rekushandisa kwesisitimu yese yeiyo 1200, 1300X, 1500X, uye 1800X ese achimhanya ese ari maviri base kumhanya uye akavharirwa pa4 GHz, kunze kwe3.9 GHz yeRenzen 3. Izvi zvese zvakaitwa neGPU imwechete marongero, mamaboard, BIOS, kutonhora, uye huwandu hwevateveri saka chero mutsauko pano unongoitika nekuda kwekukosha kuverenga uye kumhanya kwemaawa. Iwe unogona kuona iyo Ryzen 3 1200 yakawana simba nzara kana ichipfekenura, zvaitora yakawanda magetsi kuti igadzikane.
Sezviri pamusoro negirafu remagetsi, uku kupararira kwetembiricha kunomiririra iyo 1200, 1300X, 1500X, uye 1800X dzese dzichimhanya zvese nekumhanyisa base uye dzakakiiwa pa4 GHz, kunze kwe3.9 GHz yeRenzen 3. Izvi zvese zvakaitwa nemamiriro akafanana eGPU, mamaboard, BIOS, kutonhora, uye huwandu hwevateveri saka chero mutsauko pano unongoitika nekuda kwekukosha kuverenga uye kumhanya kwemaawa. Iwe unogona kuona iyo Ryzen 3 1200 zvakare yakapisa kana ichidarika overulsing nekuda kwesimba rakawedzerwa rakadhonzwa.
Mukupedzisira, iyo Ryzen 3 processor ndeye bhajeti processor. Kuita, kunyanya mukutamba, kwaive kwakanaka kwazvo. Makwikwi pano anoitirwa kuve iwo Intel i3 akateedzana, ayo ayo chete ane maviri epanyama macores. Ese eRyzen 3 akateedzana ane mana epanyama macores. Nemitambo iri kushandisa zvizere quad core processor mazuva ano, izvo zvinogona kureva rubatsiro muFPS yevatambi.
Iyo Ryzen 3 1200 ichatangisa paMSRP ye $ 109, iyo 1300X iri $ 129. Kana iwe ukabatanidza imwe yeiyi neB350 yakavakirwa mamaboard uye yepakati-renji GPU, iwe unogona nyore kuvaka yakazara yakazara yemitambo nhare ine GTX 1060 kwemadhora mazana manomwe kusvika masere-700 pasina kutema makona pazvinhu zvemhando yepamusoro.
AMD Ryzen 3 1200 uye 1300X CPU Ongororo inzvimbo kubva: Overclockers - The Performance Computing Community
AMD Ryzen 5 1500X uye 1600X CPU Ongororo
AMD Ryzen 3 1300X uye Ryzen 3 1200 Yekuongorora Chinyorwa
Intel inoburitsa yekupedzisira Haswell IGP madhiraivha e Windows 7 uye 8
ASUS ROG Crosshair VII Gamba WiFi Ongororo
AMD RYZEN 7 1700x uye 1700 CPU Review
Intel Core i9-9900K CPU Review: Zvimwe Zvishandiso, Kachimbidzi, uye Nhamba Yakakwirira
← Supercharge Yako Kutumira Simba Uchishandisa Cronycle uye dlvr.it EVGA Inotangisa iyo GTX 1080 Ti K | NGP | N Edition Kadhi reVhidhiyo →